Umzi mveliso weLaser Optics - Abenzi baseLaser Optics, abaXhasi
Ukukhanya esikubonayo kugubungela i-laser optics; isibane se-laser; Ukuhambisa ngokukhanya kunye nokusetyenzwa kwezixhobo ze-infrared. Kubandakanya iifestile, ilensi, iiprizimu. Ngokubanzi, ii-optics zethu zithunyelwa kunye okanye ngaphandle kokuphakanyiswa ngokwesicelo sabathengi.
Iplani-concave lens yeyona nto ixhaphakileyo esetyenziselwa ukukhanya kunye nokwandiswa kwemitha. Yogqitywe ngepeyinti ezichasayo, iilensi zisetyenziswa kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-optical, lasers kunye nakwiindibano.
I-DIEN TECH ibonelela ngomgangatho ophezulu kunye neefilitha eziphazamisayo eziphazamisayo ngaphakathi kwibala elibonakalayo ukusuka kwi-200 nm ukuya kwi-2300 nm.
Ngokubanzi, isibane seXenon kufuneka sitywinwe kwityhubhu yeglasi ye-quartz yee-electrode zentsimbi ezimbini ukugcina amandla ombane, emva kwetyhubhu ephezulu yokuthambisa ezaliswe ngonyango lwegesi ye-xenon, ukukhupha ukubetha kwempembelelo yokukhanya kwesibane sokukhutshwa kwerhasi. Isibane seXenon sisetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokukrola we-laser, umatshini we-laser welding, umatshini we-laser wokugrumba, umatshini wobuhle be-laser. Senza i-Xenon Lamp yokukhetha ityhubhu ye-quartz esemgangathweni ye-UV njengesixhobo setyhubhu kumgangatho ophezulu we-thorium tungsten, i-barium, i-cerium tungsten i-electrode tungsten okanye i-xenon isibane se-electrode, enomthamo womthwalo, umgangatho ophezulu wokumpompa umgangatho we-laser beam, ubomi obude kunye nezinye izinto. .